နှလုံးသားရဲ့password
'' ၁၉.၁၁.၁၂ နေ့ ဖြန့်ချိမယ့်စာအုပ်အသစ်ကလေးပါ..''
'' လူတစ်ယောက်ရဲ့နှလုံးသားကို ဖွင့်နှိုင်ဖို့ ဆိုတာ..
နှလုံးသားချင်းသာ နားလည်နှိုင်တဲ့ 
နှလုံးသားရဲ့password ကို သိထားမှ..''
ကိုယ်သယ်ပိုးရမယ့် ဝန်တစ်ခုကို ကိုယ်စားသယ်ပိုးပေးတတ်တဲ့ ကိုယ်ပွားတစ်ခု...
ကိုယ်ငိုကြွေးခါနီး ညင်သာစွာ အဆင်သင့်ဖြစ်နေတတ်တဲ့
ကိုယ်လမ်းပျောက်ခါနီး လှမ်းပေးလာတတ်တဲ့ လက်တစ်စုံပါ ။
အချစ်က သင့်အားပြုစားခဲ့ သော်...
'' အချစ်က သင့်အားပြုစားခဲ့ သော်...''
အချစ်က မျက်လှည့် တစ်ခုနှင့် တူသည်..။
ကိုယ်နဲ့အယူအဆ မတူတိုင်းလည်း သူမမှားပါဘူး..။
ကိုယ်နဲ့အတွေးအခေါ်မတူတိုင်းလည်း သူမညံ့ပါဘူး..။
ကိုယ့် ရဲ့အလိုဆန္ဒတွေကို မဖြည့် ဆည်းပေးနှိုင်တိုင်းလည်း သူမဆိုးပါဘူး..။ လွန်းထားထား(ဆေးတက္ကသိုလ်)
သူပေးတိုင်းလည်း ကိုယ်ယူမှ ရတာပါ ။
သူတောင်းတိုင်းလည်း ကိုယ်ပေးမှဖြစ်တာပါ ။
ချစ်တိုင်းလည်း ကိုယ်တုန့် ပြန်မှ ချစ်သူတွေဖြစ်ခွင့်ရှိတာပါ ။
သူမုန်းတိုင်းလည်း ကိုယ်ပြန်မုန်းမှ ရန်သူတွေဖြစ်ရတာပါ ။
လမ်းရှိတိုင်းလည်း ကိုယ်လျှောက်လှမ်းမှ ခရီးရောက်တာပါ ။
လူတိုင်းဆီက ချီးကျူးစကားသံတွေကြားချင်ခဲ့ ပေမယ့် ..
တခြားသူတစ်ယောက်ကို စတင်ချီးကျူးစကားဆိုဖို့ ..
လူတိုင်းဆီက မာယာကင်းတဲ့ ရိုးသားတဲ့ ဆက်ဆံရေးကို
ကိုယ်က စတင်ရိုးသားကြည့်ဖို့ ..သတိမေ့ချင်မေ့နေလိမ့်မယ်..။
သူတစ်ပါးဆီက နက်ရှိုင်းလေးနက်လွန်းတဲ့ချစ်မြတ်နိုးခြင်းကို
ကိုယ်ကိုယ်တိုင်က စတင်လေးနက်ကြည့်ဖို့ 
မလိုအပ်သေးဖူးလို့ထင်ချင်ထင်မိနေလိမ့်မယ်..။
နောင်ဘယ်တော့ မှ ပြောခွင့်မကြုံတော့ ဘူးဆိုတဲ့ခံစားမှုမျိုးနဲ့ ..
နောင်ဘယ်တော့ မှ ပြုံးပြခွင့်မရှိတော့ ဘူးဆိုတဲ့ ခံစားမှုမျိုးနဲ့ ..
နောင်ဘယ်တော့ မှ..ချစ်ခွင့်မရှိတော့ ဘူးဆိုတဲ့ မက်မောမှုမျိုးနဲ့ ..
ကိုယ့် ရဲ့ လိုအင်တွေ အကုန်နောက်ဆုတ်သွားတယ်.။
ကိုယ့် ရဲ့ အခွင့်အရေးတွေ ဒုတိယဖြစ်ကုန်တယ်..။
ကိုယ်ရဲ့ အသက်ရှင်ခြင်းတောင် သူ့အတွက်ဖြစ်သွားတယ်..။
တကယ်သာ နေတတ်မယ်ဆိုရင် ဘဝဆိုတာ ပျော်စရာအကောင်းဆုံး ခရီးတစ်ခု...
တကယ်သာ ချစ်တတ်မယ်ဆိုရင် ချစ်သူဆိုတာ ကိုယ့်ရဲ့ရင်ချင်းဆက်
တကယ်သာ ကြိုးစားကြည့်မယ်ဆိုရင် အောင်မြင်မှုဆိုတာ ကိုယ့်အတွက်
အလှပဆုံး စိမ်ခေါ်မှုတစ်ခုပါ ...။
မျှော်လင့်ထားသလိုဖြစ်မလာသေးတဲ့ အခိုက်အတန့့် ကလေးမှာ အဲဒီအခြေအနေကလေးကို မျှော်လင့်ချက်ကင်းကင်းနဲ့ အကောင်းဆုံး ရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားခြင်းဟာ အသစ်တည်ဆောက်လိုက်တဲ့ မျှော်လင့်ချက်တစ်ခုပါ ။
တစ်နေ့ တစ်ကြိမ်လောက် ဖြူစင်ရိုးသားတဲ့အပြုံးကလေးနဲ့ ပြုံးပြဖူးပါရဲ့ လား..။
တစ်နေ့ တစ်ကြိမ်လောက် မာယာမပါတဲ့ ချီးကျူးစကားကလေး ပြောပြဖူးပါရဲ့ လား..။
တစ်နေ့တစ်ကြိမ်လောက် သူ့အပြစ်သေးသေးလေးကို နားလည်ခွင့်လွှတ်ပေးဖူးပါရဲ့ လား..။
တစ်နေ့တစ်ကြိမ်လောက်..သူ့ကိုချစ်တဲ့ အကြောင်း ရိုးရိုးသားသားကလေး ပြောပြဖူးပါရဲ့ လား..???
မင်း အမြင့်ကို ပျံသန်းလေလေ..
မင်းရဲ့ တာဝန်က ခဲတွေကို ရှောင်ရှားဖို့ မဟုတ်ဘူး..။
ပိုပိုမြင့်နှိုင်သ၍ မြင့်အောင်ပျံသန်းဖို့ ပါ..။
ပျော်ရွှင်ခြင်းတွေကို တစ်နေ့နည်းနည်းစီ ရင်ဘတ်ထဲမှာစုစုထားပေးပါ..။
တစ်ချိန်မှာ ဝမ်းနည်းကြေကွဲနေချိန် ..ပျော်ရွှင်ခြင်းတွေပြတ်လပ်သွားတဲ့ အခါ..
ရင်ဘတ်ထဲက စုဆောင်းထားတဲ့ပျော်ရွှင်ခြင်းတွေပြန်အသုံးဝင်လာပါလိမ့်မယ်..။
သမီးတို့ခေတ်ဂျာနယ် နှင့် အင်တာဗျူး
သိပ်ခက်တဲ့ အရာတွေကို လွယ်ကူအောင်လုပ်ယူရတာ စိမ်ခေါ်မှု တစ်ခုပါ..
သိပ်လွယ်ကူတဲ့ အရာတွေကို ခက်အောင်လုပ်ယူတာကတော့ ..
ကိုယ့် ကိုယ်ကို ပြန်နှိပ်စက်ရာကျပါတယ်..။
အချစ်ကို နားမလည်နိုင်သေးခင်ကတော့ ..
ကိုယ်စိတ်ချမ်းသာ ပျော်ရွှင်ဖို့ အတွက် ..
သူတပါးကို ချစ်တာလို့ထင်ခဲ့ တယ်..။
အချစ်ကို နားလည်လာချိန်ကျတော့ ..
ကိုယ်ချစ်တဲ့ သူ စိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ဖို့ အတွက်..
ကိုယ့် ဘဝကို ပေးဆပ်ပြီးသား ဖြစ်နေနှင့်ခဲ့ ပြီ..။
လျှို့ ဝှက်ချက်ကင်းသော နှလုံးသား..ပေါ့ပါးလတ်ဆတ်လွန်းတယ်..။
ယုံကြည်ကိုးစားမှုက လူနှစ်ယောက်ကို ပိုပိုနီးသွားစေတယ်..
သံသယက လူနှစ်ယောက်ကို ပိုပိုဝေးကွာသွားစေတယ်..
အကောင်းမြင်စိတ်က လူနှစ်ယောက်ကို မျက်နှာချင်းဆိုင်လျှောက်လှမ်းခွင့်ပေးတယ်..။
အဆိုးမြင်စိတ်က လူနှစ်ယောက်ကို ကျောခိုင်းပြီးဝေးလွင့်သွားစေတယ်..။
လမ်းလျှောက်တတ်ကာစ ကလေးငယ်တစ်ဦးနဲ့ တူတယ်..။
အဲဒါကို အမှတ်မရှိတာ လို့ ပြောလို့ မရပါဘူး..။
သင်လာလျှင်..သင်နှင့်အတူ အချစ်ကိုသာ ခေါ်လာခဲ့ ပါ..
အမုန်းအတွက် ကိုယ့် ရင်ထဲမှာ နေရာမရှိလို့ ပါ..။
သင်လာလျှင်..သင်နှင့်အတူ ရိုးသားဖြူစင်ခြင်းကိုသာ ခေါ်လာခဲ့ ပါ..
လှည့် ကွက်တွေအတွက် ကိုယ့် နှလုံးသားထဲမှာ နေရာမရှိလို့ ပါ..။
သင်လာလျှင်.. နာကြည်းမှုနဲ့ ရန်ငြိုးမုန်းမာန်တွေ စွန့်ပစ်ချန်ထားရစ်ခဲ့ ပါ..
နောင်တတွေအတွက် ကိုယ့် ရင်ဘတ်ထဲမှာ နေရာမရှိလို့ ပါ..။
Happy Birthday .. သမီးလေး
ချစ်မငြီးတဲ့ မေ့မျက်ရှူသမီးလေး မေ..
ချစ်သမီးလေးရဲ့မွေးနေ့ရက်မြတ်မှသည်..
သူတထူး၏ ကျေးဇူးကိုသိနားလည်ပြီး တုန့်ပြန်ပေးဆပ်တတ်သော..
ကျန်းမာချမ်းသာစွာ လိုတရပြီးပြည့် စုံသော..
ဖေနဲ့မေကဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်..။
Labels: ကဗျာ , နှစ်သစ်နှုတ်ခွန်းဆက်
လူတယောက်ကို မုန်းနေမိပြီဆိုရင်.. ကိုယ်ရဲ့ စိတ်နှလုံး တစ်ခုလုံးကို.. အဲဒီလူဆီမှာ.. အကျဉ်းကျခံထားလိုက်ရတာနဲ့အတူတူပဲ..
'' ဇွန်၈ အမှတ်တရ မှတ်တမ်း...''
ဒီနေ့မိုးလေးက တဖွဲဖွဲနဲ့ချစ်စရာ့နေ့ကလေးပါ..။ ညက ဆယ့် နှစ်နာရီထိုးတာနဲ့ချစ်မောင်ဆီက မွေးနေ့အနမ်းကလေး ပထမဆုံးရရှိပါတယ်..။ ပြီးတော့သိပ်ချစ်စရာကောင်းတဲ့မွေးနေ့ကာဒ့် ကလေးရယ်ပေါ့ ..။ မနက်မိုးလင်းလာတော့ ကျွန်မစွဲလမ်းရတဲ့မျက်နှာစာအုပ်ကြီးပေါ်မှာ..ကျွန်မကိုချစ်တဲ့ .. ကျွန်မကချစ်တဲ့ ညီအစ်မလေးတွေဆီက..ချစ်စရာ မွေးနေ့ဆုတောင်းလေးတွေနဲ့ဝေဆာစည်ကားလို့ပျော်စရာကြီးရယ်..။ ကျွန်မ အရမ်းကျေးဇူးတင်မိပါတယ်..။ လူတွေ အများကြီးဆီက အချစ်တွေ.. ဆုမွန်ကလေးတွေရရှိတာ..ကျွန်မ အရမ်းပျော်ပါတယ်..။ ကျွန်မရဲ့ နေ့ကလေးကို ပြီးပြည့် စုံသွားစေပါတယ်..။ တကယ်တော့ဇွန် ၈ ရက် ဟာ..ကျွန်မချစ်တဲ့ကျွန်မမေမေရဲ့ မွေးနေ့လည်း ဖြစ်တာမို့ .. ဒီနေ့တိုင်းမှာ အိမ်မှာ ဘုန်းဘုန်းတွေပင့် ပြီး ဆွမ်းအမြဲကျွေးလေ့ရှိပါတယ်..။ ဒီနေ့ အိမ်မှာ လယ်တီကျောင်းက ဘုန်းဘုန်း ငါးပါးပင့်ပြီး '' ရွှေဘဲ restaurant'' က ဟင်းလျာတွေ အစုံမှာပြီး ဆွမ်းကပ်ပါတယ်..။ ဒီနေ့ပဲ ထူးထူးခြားခြားရောက်လာတဲ့ပါဆယ်ထုပ်ကလေးက ကျွန်မရဲ့ မွေးနေ့လေးကို ပိုပြီးမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့် .စုံသွားစေပါတယ်..။ ဆရာတော်အရှင်ဆန္ဒာဓိက ဆီကပို့ ပေးလိုက်တဲ့ဓမ္မစာအုပ်ကလေးတွေ ရောက်လာလို့ပါ..။ ဘုန်းဘုန်းရဲ့မွေးနေ့လက်ဆောင်ကလေးပါ..။ ကျွန်မရဲ့ အမှတ်တရ ပျော်ရွှင်စရာနေ့ကလေးကို ပိုပြီးလှပသက်ဝင်လာအောင် ဝိုင်းပြီးဆုမွန်တောင်းပေးကြတဲ့ညီအစ်မတွေ..အကို. မောင်တွေကို .. ကျေးဇူးအရမ်းတင်ပါကြောင်း မှတ်တမ်းတင်ပါတယ်..။ မနက်ဖန်တော့ဝိဝေကာရာမကျောင်းမှာ ဘုန်းဘုန်းကို ဆွမ်းသွားကပ်မှာမို့ဒီနေ့ဟင်းတွေချက်ပါတော့ မယ်..။ ခင်မင်နီးစပ်ရာ မိတ်ဆွေအနည်းငယ်ဖိတ်ပြီး ဒန်ပေါက်ကျွေးမှာပါ..။ ညနေကျရင်တော့ချစ်သော မောင်နဲ့ချစ်သမီးလေးနဲ့အတူ ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာသွားစားပါမယ်..။
မနေ့က မွေးနေ့အကြိုကောင်းမှုကုသိုလ်အဖြစ်..မနေ့က ဝိဝေကာရာမ ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ သန့်ရှင်းရေးဝေယျာဝစ္စကုသိုလ်လုပ်ခဲ့ ပါတယ်..။
ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုကို သူငယ်ချင်းတွေအားလုံး ထပ်တူထပ်မျှ အမျှရကြပါစေရန် အမျှဝေပါတယ်..အမျှ အမျှ.အမျှ..။
ထပ်တူထပ်မျှ အမျှရကြပြီး ကိုယ်စိတ်နှဖြာ ကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ...။
.ကောင်းကျိုးမင်္ဂလာအဖြာဖြာနဲ့ပြည့် စုံနှိုင်ကြပါစေ..လိုတရနိုင်ကြပါစေ..။
အချို့ သော ပဟေဠိတွေ..အဖြေရှိပြီးသားပေမယ့်ဖြေရှင်းဖို့ မလွယ်ကူခဲ့ ဘူး...
အချို့ သော နားလည်ပေးဆပ်မှုတွေ..သိပ်များခဲ့ ပေမယ့်..တပါးသူသိဖို့မလိုခဲ့ ဘူး..
အချို့ သော အချစ်တွေ သိပ်လေးနက် နက်ရှိုင်းလွန်းခဲ့ ပေမယ့်လူသိရှင်ကြားမဖြစ်ခဲ့ ဘူး..
အချို့ သော လွဲချော်မှုတွေ..သိပ်ရယ်စရာကောင်းခဲ့ ပေမယ့်ကာယကံရှင်တောင် မသိလိုက်ဘူး..။
ကျွန်မရဲ့ အုပ်၂၀၀ပြည့်'' ကိုယ့် ရင်ဘတ်ရဲ့ တခြားအခြမ်း''
''ချစ်သော ပရိတ်သတ်ကြီးနဲ့ ..သူငယ်ချင်းတို့ ရေ...''
၂၀၁၂ ဇန်နဝါရီရဲ့၁၄ရက်နေ့ (စနေနေ့) မှာ..
ကျွန်မရဲ့ အုပ်၂၀၀ပြည့်'' ကိုယ့် ရင်ဘတ်ရဲ့ တခြားအခြမ်း'' ဆိုတဲ့ စာအုပ်ကလေးကို..
Labels: လုံးချင်းဝတ္ထုသစ်မိတ်ဆက် , နှစ်သစ်နှုတ်ခွန်းဆက်
ကိုယ့် အတွေးတွေနဲ့ကိုယ့် ကိုယ်ကိုယ် ပြန်မနှိပ်စက်ပါနဲ့ ..
ကိုယ့် အတွေးလေးတွေနဲ့ကိုယ့် ကိုယ်ကိုယ် စိတ်ချမ်းသာအောင်ထားပါ..။
ခမ်းနားစွာ ပြင်ဆင်ခင်းကျင်းထားသော ဝဲဘက်ရင်ရဲ့ တစ်နေရာ
''ခမ်းနားစွာ ပြင်ဆင်ခင်းကျင်းထားသော ဝဲဘက်ရင်ရဲ့ တစ်နေရာ..''
လူတိုင်းပါရမီရှင်ဖြစ်ဖို့အခွင့်အရေးရှိပြီးသားပါ..။
စိတ်ဓာတ်ပြင်းပြထက်သန်မှုနဲ့ မလျှော့ တဲ့ ဇွဲလုံ့လဝီရိယနဲ့ ..
'''' တားမြစ်ထားတဲ့သစ်သီးဟာ..ပိုပြီးချိုမြိန်တတ်သလား..
အဲ့ ဒါဆိုရင်..တားမြစ်ထားတဲ့အချစ်ကရော..ပိုပြီးဖြားယောင်းတတ်သလား..''
''မေလဆန်းမှာ..ချစ်သောစာဖတ်ပရိတ်သတ်ဖတ်နှိုင်ဖို့ပြင်ဆင်ထားပါတယ်..''
အပြင်းစားဥယျာဉ်မှူး ဇာတ်ကားကို ဒီနေရာ နှင့် ဒီနေရာမှာ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီ။
အပြင်းစားဥယျာဉ်မှူး ဝတ္ထုရှည်ကို ဒီနေရာမှာ ဝင်ရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
Labels: ဗွီဒီယို , ဝတ္ထုရှည်
လူသားအားလုံး ကျန်းမာချမ်းသာစွာနဲ့ ..
ဘေးရန်ကင်းလို့ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ကြပါစေ..။
ကောင်းကျိုးလိုအင်များပြည့် ဝကြလို့ လိုတရကြပါစေနော်..။
နေတွေပူနေချိန်မှာ..မိုးနေ့တွေကို တမ်းတမနေပါနဲ့ ..
မိုးတွေရွာနေချိန်မှာ..နေသာရက်တွေကို လွမ်းဆွတ်မနေပါနဲ့ ..
မိုးရေထဲမှာ ပျော်ရွှင်ခြင်းကို အပြည့် အဝခံစားလိုက်ပါ..။
ဝေးကွာသွားမှ နီးနီးကပ်ကပ်ရှိခဲ့ တာကို တောင့်တမနေပါနဲ့ ..
မုန်းသွားတော့ မှ ချစ်ခဲ့ တာကို နောင်တရမနေပါနဲ့ တော့ ..
သူကိုယ့် ကိုချစ်နေချိန်မှာ.. သူ့အချစ်ကို တန်ဖိုးထားလေးစားပေးပါ..။
လေးနက်ပြီး အနှစ်သာရပါတဲ့စကားတွေဟာ..
ပေါ့ သွမ်းတဲ့အနှစ်ဗလာ စကားတွေဟာ..
ဝင်လာတဲ့ နားဝမှာပဲ လျှံကျပျောက်ကွယ်စမြဲပါ..။
နှလုံးသား တစ်စုံကိုလွှမ်းမိုးဖို့ တောင် သိပ်ခက်တာ..
နှလုံးသားပေါင်းများစွာကို သိမ်းပိုက်လွှမ်းမိုးထားနိုင်ဖို့ ဆိုတာ..
တော်ရုံတန်ရုံမေတ္တာမျိုး..ပေးဆပ်မှုမျိုး..အနစ်နာခံမှုမျိုးနဲ့မရနိုင်ပါ..။
အခွင့်အရေးတွေကို လက်မလွတ်ပါစေနဲ့လို့ ပြောတဲ့ စာရေးဆရာမ လွန်းထားထား
ပထမဆုံး ဒီစာအုပ် ၂၀၀ပြည့် အထိမ်းအမှတ်ပွဲလေး လုပ်ဖို့ စိတ်ကူးရလာပုံကို ပြောပြပေးပါဦး။
ဒါကတော့ မထားရဲ့ အုပ်(၂၀၀)ပြည့် ပွဲလေးပေါ့။ ဒီပွဲလေးကို လုပ်ဖြစ်ခဲ့တာက အုပ် (၂၀၀)ပြည့်တဲ့အထိ အားပေးလာကြတဲ့ မထားရဲ့ပရိသတ်ကြီးနဲ့ တွေ့ဆုံချင်တယ်။ နောက်ပြီးတော့ သူတို့ကို ကျေးဇူးတင်မိတယ်။ ကျေးဇူးလည်း တုံ့ပြန်ချင်မိတဲ့အတွက် လက်ဆောင်တစ်ခုခု ပြန်ပေးချင်တယ်။ ဘာပေးရင်ကောင်းမလဲလို့ စဉ်းစားမိတဲ့အခါ တခြားလက်ဆောင်တွေထက် မထားရဲ့ ကိုယ်ပိုင်စာအုပ်၊ မထား လက်မှတ်ရေးထိုးပေးထားတဲ့စာအုပ်ဆိုရင် ပရိသတ်တွေအတွက် ပိုတန်ဖိုးထားမယ်၊ ပိုမက်မောမယ်လို့ ယူဆမိတဲ့အတွက် အမြန်စီစဉ်လိုက်ပြီး လုပ်လိုက်တာပါ။
ဒါဆို ပရိသတ်တွေနဲ့ ဆုံလာရတဲ့ခဏမှာ ခံစားရတဲ့ ခံစားချက်လေးကို ပြောပြပေးပါဦး။
ပျော်ပါတယ်၊ ဝမ်းလည်းသာပါတယ်။ ဒီလောက်လာမယ်လည်း ထင်မထားဘူး။ အများကြီးလာတယ်။ မထားရောက်တဲ့အချိန်မှာသူတို့တွေ စောင့်နေတာတွေ့ရတော့ဝမ်းသာတယ်။မထားလည်းဒီလိုနွေးနွေးထွေးထွေးတွေ့ချင်တယ်လေ။
အုပ်(၂၀၀)ပြည့်ပြီဆိုတော့ ဒီစာအုပ်က တခြားစာအုပ်တွေထက် ရေးရတာ အခက်အခဲရှိခဲ့ ပါသလား။
အခက်အခဲတော့ မရှိပါဘူး။ မထားက ဒီစာအုပ်ကို ရေးနေကျပုံစံတွေထက် နည်းနည်းလေးပဲ ခွဲထွက်သွားတာ။ ဆန်းဆန်းလေးဖြစ်အောင်၊ အခုခေတ် လူငယ်အကြိုက်လေးဖြစ်အောင် လုပ်လိုက်တာ၊ မထားပရိသတ်တွေက အခုဆိုရင် အသက် (၂၀၊၃၀) ဝန်းကျင်လောက်ပေါ့။ အခုခေတ် ဆယ်ကျော်သက်လေးတွေ ကြိုက်နှစ်သက်သွားအောင် ဆွဲခေါ်လိုက်တာမျိုးပါ။ သူတို့ ကြိုက်နိုင်မယ့် ခေတ်နဲ့အညီလိုက်နိုင်မယ့် ဇာတ်လမ်းဆန်းဆန်းလေးပေါ့။ အတွေးအခေါ်တွေပါမယ်၊ ဒဿနတွေပါမယ်။ Message လေးတွေလည်းပါမယ်။ အခုခေတ်ကလေးတွေက အဲဒါလေးတွေကို ကြိုက်ကြတယ်၊ တောင့်တကြတယ်ဆိုတော့ အဲဒီလို ပုံစံလေးဝင်အောင် ကြိုးစားထားပါတယ်။
အရင်တုန်းက ညီမလေးဖတ်ဖို့၊ အချစ်ဒဿနများနဲ့ အလှအပများနဲ့ ဆိုင်တဲ့ စာအုပ်လေးတွေ ထွက်တော့လေ ဝတ္ထုလိုင်းမဟုတ်ဘဲ အဲဒီလိုမျိုးတွေရော ရေးဖို့ရှိလား။
မထား ရေးဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်။ ဒဿနလေးတွေဆိုရင်လည်း မထား Facebook မှာ နေ့စဉ်တင်တယ်။ ပရိသတ်ရဲ့ Response က သူတို့ အရမ်းပဲ ကြိုက်ကြတယ်။ အဲဒီလို များများရေးပါလို့ တိုက်တွန်းကြတော့ မထားအနေနဲ့ အဲဒါလေးတွေ နေ့တိုင်းရေးမယ်။ ပြီးတော့ စုထားပြီး စာအုပ်လေးတစ်အုပ် လှလှပပ သေသေသပ်သပ်လေးနဲ့ ပြန်ထုတ်ဖို့ ရှိပါတယ်။
ဒါဆိုရင် ပရိသတ်တွေကို အစ်မရဲ့ စာအုပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဆက်လုပ်သွားမယ့် အစီအစဉ်တွေကိုလည်း ပြောပြပေးပါဦး။
မထား အခု ပုံမှန်လည်း ဝတ္ထုတွေ ထွက်နေမယ်။ သုတပိုင်းမှာလည်း လုပ်သွားမယ်။ မထားစိတ်က ကိုယ်အရမ်းကြိုက်သွားပြီ ဆိုရင် ပရိသတ်ကို မျှဝေချင်တယ်။ ကျန်းမာရေးဆိုလည်း ကျန်းမာရေးပေါ့။ မထား အခုဆိုရင် ယောဂလေ့ကျင့်ခန်းကို ပုံမှန်လုပ်ဖြစ်တယ်။ ပြီးတော့ ယောဂရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေလည်း သိသာလာတယ်။ အဲဒါကြောင့် ယောဂနဲ့ပတ်သက်တဲ့ စာအုပ်လေးတစ်အုပ် ပြုစုဖို့ စီစဉ်နေတယ်။ လိုအပ်တဲ့ အချက်အလက်လေးတွေရယ်၊ လုပ်ပုံလုပ်နည်းလေးတွေရယ်၊ အကျိုးကျေးဇူးလေးတွေရယ်ပေါ့။ အဲဒါလေးတွေ ပြုစုဖို့ ဆန္ဒရှိနေတယ်။ နောက်ဆိုရင် အဲဒီလိုစာအုပ်လေးတွေပဲ ဆက်ထုတ်သွားမှာပါ။
အခု ပြန်ရောက်နေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာ ကိုယ်က အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်သွားပြီလေ။ ဟိုမှာဆို ကိုယ်ကအိမ်ထောင်ရှင်မတစ်ယောက်ပေ့ါ။ အဲဒီနှစ်ခုကြားထဲမှာ ဘာတွေကွာခြားသွားတယ်လို့ မြင်မိပါသလဲ။
မထားအတွက်တော့ သိပ်ပြီးတော့ မထူးခြားပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ မထားရဲ့အလုပ်က စာရေးတဲ့အလုပ်ဆိုတော့ ဘယ်မှာရေးရေး မထားအတွက် အဆင်ပြေနေတာပါပဲ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အနုပညာရှင်ကြီးလို့တော့ မမြင်မိဘူးပေါ့။ အင်္ဂလန်မှာလည်း မထားရဲ့ တနေ့တာက အရမ်းရိုးရှင်းတယ်။ ရိုးရှင်းတယ်ဆိုတာက မနက် သမီးကို ကျောင်းပို့ပြီး မထားက စာကြည့်တိုက်သွား စာရေးတယ်၊ စာဖတ်တယ်၊ ရုပ်ရှင်ကြည့်မယ်၊ သီချင်းနားထောင်မယ် အဲဒါပဲ။ ဒီမှာနေတုန်းကလည်း ဒီအတိုင်းပဲဆိုတော့ အနုပညာသမားရယ်၊ အိမ်ထောင်ရှင်မရယ် ဆိုပြီးတော့ ကွဲပြားမနေပါဘူး။
သမီးလေးက (၆)နှစ်ခွဲ ရှိသွားပါပြီ။
သမီးအပေါ်မှာ အစ်မရဲ့ ခံယူချက်လေးလည်း သိချင်ပါတယ်။
သမီးလေးကိုတော့ မျှော်လင့်ထားတယ်။ ဒါပေမယ့် မျှော်လင့်ထားတယ်ဆိုတာက သူဘာဖြစ်ချင်လဲ၊ ဖြစ်ချင်တဲ့ပုံစံလေးကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ပံ့ပိုးပေးမယ်။ မိဘတစ်ယောက်အနေနဲ့ကတော့ ကိုယ့်သမီးကလေးကို အကောင်းဆုံး၊ အတော်ဆုံး၊ အမြင့်မားဆုံးဖြစ်စေချင်ကြတာပဲလေ။ သူ့ကို ပါရမီရှင်လေးတစ်ယောက် ဖြစ်စေချင်တယ်။ ဒါပေမယ့် အရမ်းလည်း Push မလုပ်ချင်ဘူး။ သူ ဘာကိုအားသန်လဲ၊ ဘာကိုစိတ်ဝင်စားလဲ၊ သူလုပ်ချင်တဲ့၊ ဖြစ်ချင်တဲ့ဟာကိုပဲ တိုက်တွန်းပြီးတော့ လုပ်ပေးသွားမယ်လို့ စိတ်ကူးထားတယ်။
အစ်မ ဒီပြန်ရောက်နေတဲ့အခိုက်မှာ ဒီမှာလည်း ပြောင်းလဲမှုတွေ ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်။ အဲဒီအပေါ်မှာ အစ်မရဲ့ အမြင်လေး သိချင်ပါတယ်။
မထားရဲ့အမြင်ကတော့ အစစအရာရာ ကောင်းသောဘက်ကို ဦးတည်ပြီးတော့ ပြောင်းလဲမှုတွေ အများကြီးတွေ့နေရတယ်။ မနှစ်ကနဲ့မတူဘူး၊ အစစအရာရာ နွေးနွေးထွေးထွေးနဲ့ ပွင့်လင်းမှုတွေ ရှိလာတယ်။ နောင်နှစ်တွေမှာလည်း ဒီထက်ပိုပြီး ကောင်းသောပြောင်းလဲခြင်းတွေပဲ ရှိလာမယ်ဆိုရင် မထားအနေနဲ့ အရမ်းပျော်မှာပဲ။ မထားတို့ သူငယ်ချင်းတွေလည်း ဒီကိုပြန်လာပြီး လုပ်ငန်းတွေ၊ Businessတွေ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ ပြင်ဆင်နေကြတယ်။ တချို့ဆို ဒီကိုပြန်လာပြီး လုပ်ကို လုပ်နေကြပြီဆိုတော့ အရမ်းကောင်းပါတယ်။
ဒီလိုပြောင်းလဲလာတဲ့အတွက် လူငယ်တွေရဲ့ အနာဂတ်တွေ ကောင်းဖို့ ဖြစ်လာပြီပေါ့။ ဒီလိုပြောင်းလဲမှုတွေကြားထဲက လူငယ်တွေအတွက် အစ်မရဲ့ အကြံဥာဏ်လေးကို ပြောပြပေးပါဦး။
လူငယ်တွေအနေနဲ့ကတော့ အခုခေတ်လူငယ်လေးတွေက အရမ်းကြိုးစားကြတယ်။ မထားသိထားသလောက် မထားတို့ အရမ်းလေးစားရတယ်။ လူငယ်လေးတွေက တော်တော်ကို ကြိုးစားလာကြတာ။ သူတို့အတွက်က ထူးထူးခြားခြား အကြံဥာဏ်ပေးရတာထက် မထားပြောချင်တာက အခွင့်အရေးဆိုတာကို လက်မလွတ်ပါစေနဲ့။ အမိအရဆုပ်ကိုင်ပြီး ကြိုးစားဖို့ အကြံဥာဏ်ပေးချင်ပါတယ်။ တကယ်တော့ ထူးထူးခြားခြားကြီး အကြံပေးစရာ မလိုပါဘူး။ သူတို့တွေက အရမ်းတော်တယ်။
ကိုယ့်ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကို သွားတဲ့အခါ အခက်အခဲတွေ ကြုံရမှာပဲလေ။ ဒီလိုအခက်အခဲတွေကို ကျော်ဖြတ်ရတဲ့အခါ ဘယ်လိုကျော်ဖြတ်ရမယ်ဆိုတာ ပြောပြပေးပါဦး။
မထားလျှောက်ခဲ့တဲ့လမ်းက ချောမွေ့တဲ့လမ်းတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ခလုတ်ကန်သင်းတွေ ရှိခဲ့တာပဲလေ။ ကိုယ့်ကို တွန်းတဲ့တိုက်တဲ့သူတွေရှိတယ်။ ကိုယ့်ကို ခြေထိုးခံတဲ့သူတွေရှိတယ်။ အစစအရာရာပေါ့။ လူငယ်ဆိုတဲ့စိတ်က မဟုတ်မခံစိတ်ရှိတယ်။ ကိုယ့်ကို လူတယောက်က ဆုံးရှုံးအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင် အဲဒီလူကို အရှုံးမပေးဘူးပေါ့။ အရှုံးမပေးချင်တဲ့ မာန်က လူတိုင်းမှာရှိတယ်။ မထားလည်း အဲဒီမာန်လေးနဲ့ လျှောက်လှမ်းခဲ့တာပေါ့။ မထားပြောချင်တာက ဘဝမှာ ဘယ်လိုအခက်အခဲပဲ ပေါ်လာပါစေ၊ မတော်တဆ ချော်လဲသွားခဲ့ရင်တောင် ပြန်ထနိုင်ရမယ်။ ပြန်ထနိုင်ခြင်းဟာ ကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုပါပဲ။ မထား အဲဒါလေး ပြောပြချင်ပါတယ်။
လူငယ်ဘဝက လွတ်လပ်ခွင့် (Youth & Freedom) အပြည့်အဝရတယ်ဆိုတဲ့အပေါ် အစ်မရဲ့ အမြင်လေး ပြောပြပေးပါဦး။
လွတ်လပ်ခွင့်ဆိုတာကောင်းပါတယ်။ မထားပြောတာက လွတ်လပ်ခွင့်ရှိမှပဲ လူငယ်တွေက တိုးတက်မှာလေ။ ဆိုလိုတာက အပင်လေးတစ်ပင်က လောင်းရိပ်ရှိရင် ဘယ်လိုမှ ထိုးဖောက်လာမှာ မဟုတ်ဘူး။ လောင်းရိပ်မရှိမှ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ရှင်သန်နိုင်မှသာ သူ အစွမ်းကုန် တိုးတက်နိုင်မှာလေ။ အဲဒီလိုပဲ လူငယ်ဘဝမှာလည်း အနှောင်အဖွဲ့တွေ၊ အချုပ်အနှောင်တွေ၊ စည်းမျဉ်းဥပဒေတွေ မရှိရင် သူ့ရဲ့အစွမ်းရှိသလောက် တက်လာနိုင်မှာ။ လွတ်လပ်မှုရှိတာ ကောင်းပါတယ်။ လွတ်လပ်မှုဆိုတာကလည်း စည်းကမ်းတကျ လွတ်လပ်မှုက ပိုကောင်းပါတယ်။ စည်ကမ်းတကျ လွတ်လပ်မှုက လူငယ်တွေအတွက် လိုအပ်ပါတယ်။
အစ်မရဲ့ စာဖတ်ပရိသတ်တွေက စာမျက်နှာပေါ်ကတဆင့် နှုတ်ဆက်စကားလေး ပြောပေးပါဦး။
မထားအနေနဲ့ အခုချိန်အထိ မထားအပေါ် သစ္စာရှိရှိ စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ အားပေးလာကြတဲ့ ပရိသတ်တွေကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ မထားကို အားပေးကြပါဦး။ မထားလည်း ဆက်လက်ပြီး ကြိုးစားနေမယ်။ ဆက်လက်ပြီးတော့ မထား ပိုပြီး ကောင်းသထက် ကောင်းအောင် ကြိုးစားနေပါတယ်။ ကျေးဇူးလည်းတင်ပါတယ်။
People မဂ္ဂဇင်း (၉)နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်အတွက် "၉"ဂဏန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး အမှတ်တရ ဘာရေးရမလဲလို့စဉ်းစားရင်း "၉"နဲ့ပတ်သက်တဲ့ WIKIPEDIA ထဲလည်း ဝင်ရှာကြည့်မိပါတယ်။ တကယ်တမ်းပြောရရင် "၉"ဂဏန်းဟာ ကျွန်မအတွက် အရေးပါတဲ့ဂဏန်းတစ်ခု ဆိုပါတော့...။
ကျွန်မလေးစားကြည်ညိုရပါသော ဆရာတော်အရှင်ဆန္ဒာဓိကရဲ့ မွေးနေ့ဟာ '၉၊ ဇန်နဝါရီ' ပါ။ ကျွန်မချစ်ခင်မြတ်နိုးရပါသော ကျွန်မရဲ့ခင်ပွန်း ဒေါက်တာအံ့ထွန်းမောင်ရဲ့ မွေးနေ့ဟာလည်း "၉ ဇန်နဝါရီ" ဘာကြောင့်မှန်းမသိ '၉'ဂဏန်းကို အင်အားရှိတဲ့စွမ်းအင်ပါဝါတမျိုးရှိတယ်လို့ ကျွန်မယုံကြည်ပါတယ်။
မြတ်စွာဘုရားဂုဏ်တော်ဟာ '၉' ပါး ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်မ မြတ်စွာဘုရားရှင်ကို ဆီမီး၊ နံ့သာတိုင် ပူဇော်တိုင်း '၉'ကို အင်အားရှိတဲ့ ဂဏန်းတစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ '၉'ရဲ့အသံထွက်ဟာ Long lasting ဆိုတဲ့ စကားလုံးအတိုင်း တူညီနေလို့ပါ။ "ကြာရှည်မြဲမြံခြင်း" ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ပေါ့နော်။ ပြီးတော့ '၉'ဂဏန်းဟာ တရုတ်နဂါးနဲ့ ဆက်နွှယ်ပတ်သက်မှုရှိပါတယ်။ တရုတ်နဂါးဟာ Magic and power ရဲ့သင်္ကေတပါ။
ဘာကြောင့်ပဲဖြစ်ပါစေ... ကျွန်မရဲ့ဘဝမှာ အမှတ်တရ '၉'တွေ များစွာရှိခဲ့သလို... '၉'ဂဏန်းကိုလည်း ကျွန်မ မြတ်နိုးသက်ဝင်စွဲလန်းမိပါကြောင်း...
ဒါပေမယ့်အမေ့နှလုံးသား ပြိုင်သူမဲ့အောင် လှနှိုင်ရက်လွန်းတယ်..။
အမေဟာ..သံတမန် တစ်ယောက်လို အပြောမချိုပါဘူး..
ဒါပေမယ့် ..အမေ့စေတနာ ..အနှိုင်းမဲ့ အောင်ချိုမြလွန်းပါတယ်..။
အမေဟာ..တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့သူရဲကောင်းတစ်ယောက် မဟုတ်ပါဘူး..
ဒါပေမယ့် ..အမေ့အကာအကွယ်ဟာ..မဟာရံတံတိုင်းထက် လုံခြုံလွန်းလှတယ်..။
ဒါပေမယ့် .အမေ့မေတ္တာဟာ..မရပ်တန့် စတမ်း တသွင်သွင်စီးလျက်ပါ..။
အမေ့ကို သိပ်ချစ်ပါတယ် အမေ..။
Labels: ကဗျာ , အတွေးစာစု
မျှော်လင့်ခြင်းတွေနဲ့ လျှောက်နေချိန်မှာ..မျှော်လင့်ခြင်းလမ်းကလေးပေါ့ ..။
ချစ်သူ့လက်ကိုတွဲလို့လျှောက်နေမိချိန်မှာ..ချစ်သူ့လမ်းကလေးပေါ့ ..။
အမုန်းနဲ့ လမ်းခွဲရချိန်မှာ..နှုတ်ဆက်လမ်းခွဲကလေးပေါ့ ..။
လမ်းကလေးက ပြောင်းလဲသွားတာ မဟုတ်ပါဘူး..
ဒီလမ်းကလေးကို ဖြတ်လျှောက်သွားတဲ့ ..
လူတွေရဲ့ စိတ်ခံစားမှုတွေကသာ..ပြောင်းလဲသွားခဲ့ တာပါ..။
ကျွန်မရဲ့ အုပ်၂၀၀ပြည့်'' ကိုယ့် ရင်ဘတ်ရဲ့ တခြားအ...
ခမ်းနားစွာ ပြင်ဆင်ခင်းကျင်းထားသော ဝဲဘက်ရင်ရဲ့ တစ်ေ...